ယခုနှစ် ချန်ပီယံလုပွဲ ပိုမိုခက်ခဲမည်ဟု ဘာနာဒို ဟောကိန်းထုတ်၊ ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲ မတိုင်မီ ကစာ? - Yangon Media Group
ယခုနှစ် ချန်ပီယံလုပွဲ ပိုမိုခက်ခဲမည်ဟု ဘာနာဒို ဟောကိန်းထုတ်၊ ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲ မတိုင်မီ ကစာ?
မန်စီးတီး တောင်ပံကစားသမား ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားက အသင်းမှာ ယမန်နှစ်ရာသီက စံချိန်သစ်များစွာ ဖြင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင် ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်ချန်ပီယံဆုအတွက် အားပြိုင်မှုမှာ ပိုမိုပြင်းထန်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဟောကိန်း ထုတ်ပြောကြားခဲ့သည်/
မန်စီးတီးသည် ယမန်နှစ်က ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ရာတွင် ဒုတိယ နေရာမှ မန်ယူကို ၁၉ မှတ်အထိဖြတ်ထား နိုင်သည့်အပြင်အခြား စံချိန်များကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ချန် ပီယံဆုအတွက် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရဖွယ်ရှိနေသည်။ စပါးကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းမှာ ရာသီအစ ၁ဝ ပွဲကစားခဲ့ရာ တွင် ရှစ်ပွဲမြောက်နိုင်ပွဲဖြစ်သ လို ပေးဂိုးမရှိသောခြောက်ပွဲ မြောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဂိုး ကွာခြားချက်ဖြင့်သာ ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိနိုင်ခြင်း၊ လီဗာပူးနှင့် ချဲလ်ဆီးတို့ မှာလည်း မန်စီးတီးနည်းတူ ပရီးမီးယား လိဂ်တွင်ရှုံးပွဲမရှိသေးခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် ယခုနှစ်ချန်ပီယံ လုပွဲမှာ ပိုမိုပြင်းထန်မည်ဟု ဘာနာဒို ကသုံးသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာနာဒိုက ”မနှစ်က ကျွန်တော် တို့အသင်းဟာ ဒီလောက်ပွဲများများ အနိုင်ရမယ်၊ အမှတ်တွေဒီလောက် များများရမယ်လို့ ဘယ်သူမှမျှော်လင့် မထားခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုကောင်းအောင် ကစားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိသွား ကြတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကြောင့် ဒီနှစ်ချန် ပီယံလုပွဲဟာ ပိုပြီးခက်ခဲလာတော့မှာ ပါ။ သိပ်ကိုခက်ခဲတဲ့အားပြိုင်မှုဖြစ် လာမှာဖြစ်လို့ ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်သုံးမှတ် ရဖို့ဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန် တော့်အမြင်အရ လီဗာပူးနဲ့ချဲလ်ဆီးတို့ က အဓိကစိန်ခေါ်သူတွေဖြစ်နိုင်ပြီး အာဆင်နယ်ကိုလည်း ထည့်တွက်ရ မှာပါ။ စပါးကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် သူတို့ဟာလည်း ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိနေဆဲပါ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
မန်စီးတီးအသင်းသည် စပါးနှင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲအပြီး ကြာသပတေး ညတွင် ဖူလ်ဟမ်နှင့် လိဂ်ဖလားပွဲက စားရမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါပွဲမတိုင်မီ ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရသော ကစားသမားလေးဦး လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနိုင်ခဲ့၍ သတင်းကောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဂန်ဒိုဂန်၊ ဖာဘီယန်ဒဲလ်၊ ဒါနီလို နှင့် မန်ဂါလာ စသည့်ကစားသမား လေးဦးမှာ လေ့ကျင့်ခန်းအပြည့်အဝ ပြန်ဆင်းနိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး မန်ဂါလာ မှလွဲ၍ ကျန်ကစားသမားများမှာ ဖူလ် ဟမ်နှင့်ပွဲလူစာရင်းတွင် ပါဝင်လာကြ ဖွယ်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဆက်စပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အရ မန်စီးတီးနောက်ခံလူမန်ဒီမှာ စပါးနှင့် ပွဲတွင် လာမီလာကိုရန်ပြုရန်ကြိုးစား ခဲ့ဟန်ရှိသည့်အတွက် အရေးယူခံရ ဖွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းမှုများရှိခဲ့သော် လည်း ဖြစ်စဉ်ကိုပွဲချိန်အတွင်းမှာပင် အရေးမယူခဲ့သည့် ဒိုင်များကြောင့် မန်ဒီအနေဖြင့် နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိ ရသည်။